Bannaanbax looga soo horjeedo burcad badeeda iyo baarashada khayraadka badda iyo berriga ee xeebaha Somaliya oo ka dhacay Galkacyo. – Radio Daljir
Bannaanbax looga soo horjeedo burcad badeeda iyo baarashada khayraadka badda iyo berriga ee xeebaha Somaliya oo ka dhacay Galkacyo.
Galkacyo, Apr 06 ? Bannaanbax ballaaran oo ay ka qaybgalayeen boqolaal dadweyne ah ayaa maanta ka dhacay magaalada Galkacyo kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Cumar Samatar.
Bannaanbaxaan, ayaa looga soo horseeday falalka gurran ee xaalufinta badda iyo berriga taas oo la sheegay in ay gaystaan maraakiibta shisheeye ee illaalada ka haya badda Soomaaliya, waxaana sidoo kale ay bannaanbaxayaashu tilmaamayeen diidmadooda ku aaddan burcad-badeedda oo ay sheegeen in ay sal u yihiin dhibta haatan lagu hayo badda iyo berrigaba.
Ardayda iskuulka Cumar Samatar ee dibadbaxa dhigayey ayaa ku dhawaaqayey ereyo liddi ku ah falalkaasi gurracan oo ay kaga soo horjeedaan dhibaatooyinka lagu hayo deegaanka Soomaalida, taas oo ay ugu horrayso gurashada khayraadka badda iyo midka berriga oo muddooyinkaan danbe ay isi soo taraysay dhalo-dhaanta ku saabsani.
Ardayda bannaanbaxa dhigayey ayaa socod lug ah ku maray barxadda weyn ee iskuulka Cumar Samatar, iyadoo maanta dhammaanba la joojiyey duruustii aqoonteed ee ardaydaasi ay dhigan jireen, si ay ku muujiyaan dareenkooda ku aaddan xaalufka badda iyo beriga, waxaana sidoo kale ay soo hadal-qaadayeen bannaanbaxayaashu qashin iyo haraadiga warshadaha quwadda oo ay tilmaamayeen in lagu shubo badda Soomaaliya, waxaana markii danbe ay iskugu yimaadeen hoolka shirarka ee iskuulka halkaasi oo khudbado aad u muhiim ah laga soo jeediyey.
Mas?uuliyiint dawladda Puntland ee gobolka Mudug iyo qaar ka mid ah golayaasha dawladda sida baarlamaanka iyo xukuumadda, maamulka iskuulka, guddoonka waxbarashada gobolka iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan, ayaa ka qaybgalay bannaanbax, kuwaasi oo iyaguna muujiyey aragtidooda ku wajahan dhibaatada lagu hayo khayraadka waddan, iyagoo dhanka kale si kululna u dhaleeceeyey falal burcad-badeedda ee afduubashada gaadiidka badda.
Wasiirka warfaafinta dawladda C/xakiim Axmed Guuleed ayaa ka mid ahaa mas?uuliyitii dawladda dhexe ee ka qaybgalay mudaharaadka, waxaana uu sheegay in u aad uga xun yahay dhibaatada lagu hayo deegaanka Soomaalida, waxaana uu u hambalyeeyey ardaydii bannaanbaxa soo abaabulay isagoo sheegay in ay xasuusinayso beri samaadkii Soomaaliya.
Waxaana wasiirka uu bannaanbaxayaasha ku dhiiro-galiyey in ay sii wadaan dadaalladooda ay uga dhiidhiyayaan dhibaatada haysta Soomaaliya, gaar ahaanna xaafulinta khayraadka badda iyo midka berriga.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad oo isna ka hadlay halkaasi ayaa sheegay in uu aad u soo dhaweynayo bannaanbaxa, waxaana uu tilmaamay jiritaanka dhammaan waxyaabaha ay ardaydu ka caraysan yihiin, waxaana uu carabka ku dhuntay dhibaato badan in lagu hayo deegaanka Soomaalida bad iyo berriba.
Duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud Xaaji Xasan, oo isna ka mid ahaa mas?uuliyiinta ka qaybgalay bannaanbaxa looga soo horjeeday xaalufinta badda iyo berriga Soomaalida iyo sidoo kale tallaabooyin aad u gurran ee ay burcad-badeeddu ku dhaqaaqaan ayaa sheegay wax laga xumaado in ay tahay arrintaasi, isagoo si gaar ahna u weeraray falalka burcadda ee ugaarashada gaadiidka badda gooshaya.
Maamulaha dugsiga sare Iskuulka Cumar Samatar Prof. Cawsay iyo qaar ka mid ah macallimiinta ayaa iyaguna muujiyey dareenkooda ku aaddan dhibaatada dadka iyo dalka Soomaaliyeedba haysta, waxaana soo jeediyeen in loo guntado sidii mur uun dhibaatadaasi looga bixi lahaa.
Iskastaba ka haatee ma ahan markii ugu horraysay oo meel ka ma ahan markii ugu horraysay oo meel ka mid ah deegaannada Puntland oo ka dhaco isku soo bax caynkaan oo kale oo looga soo horjeedo dhibaatada badda iyo berrigaba lagu hayo, waxaana uu ku soo beegmay xilli muddooyinkii ugu danbeeyey ay kordhayeen qaylo dhaanka ka soo yeeray dadyawga deggan deegaannada xeebta kulaala, halka dhanka kalena ay sii siyaadayeen falalka burcadda-badeeddu ay afduubanayaan doonyaha iyo maraakiibta badda maraysa.